ABOUT | thabisamusic
Isekelwe eMzantsi Afrika / eMelika
Imvumi, umbhali weengoma, igcisa, umzobi, umakhi woluntu, inkosikazi, umama ... uThabisa uyenza yonke into "Ndizithatha njenge 'generartist'. Ligama elivela ku-generalist. Le nto ndiyiqambe emva kokuqaphela ubukho bam ndedwa kobu bomi kukuba ukuyiphila eyona nto ndinokuyenza, ndiphonononge imida yam kwaye ndenze konke endinako ngelixa ndiphefumla kwaye ndikwazi". Le nkwenkwezi yomphefumlo isebenzisa ilizwi layo njengesandi esivakalayo sokuphefumlela kunye nokutshintsha,
UThabisa unobuqili kwaye uyathandeka eqongeni. Udibanisa izinto zeJazz yase-Afrika, i-Afropop, umphefumlo kunye ne-funk kwisitayile esahlukileyo sakhe. Unomphefumlo kodwa unomsindo, ilizwi lakhe eliyothusayo kunye namandla angenamda atsala abaphulaphuli ngalo lonke ixesha esiya eqongeni. Ungumdlali obalaseleyo eqongeni othimba iintliziyo kwaye athethe nomphefumlo.
Uzalelwe wakhulela eMzantsi Afrika, umculo kaThabisa utsalwa kakhulu kubomi obuphezulu nobuphantsi ukuze enze amava obuqu naphakamisayo. Indlela uThabisa aqhuba ngayo iyanika amandla kwaye ibonakalisa umzimba kunye namava omoya. UThabisa uhlala eguquka kwaye akavumi ukubethelela uhlobo lomculo wakhe kwaye ukholelwa ukuba isandi kunye nesimbo sakhe sikhula rhoqo kuye. Unesiphiwo segama elithetha “ukwenza abanye bonwabe,” uThabisa ligcisa elingamele liphoswe.
Amabhaso kunye neegigs
2022 New Haven City Officials & Mayoral Inauguration
Nominee for State Troubadour in 2021
ISLP 20th Anniversary of 2021
Performed a Production Play On My Block:Passing Strange written by Stew & Heide Rodewald, directed by Cheyenne Barboza at the Longwharf Theater - as a Mother, 2021
2021 Mahaffey is the recipient of Fellowship
Certificate of Completion for the Kingian non-violence training
First Position in Step and stroll, Singsation Competition hosted by AKA North Atlantic Region, March 2020
Carol Autorino Center for Art, St Joseph's Uni, West Hartford, CT, November 2018
Trinity Church, World Refugee Day, New Haven, CT, June 2018
South African Regional Tour SA, for 2018
Two Albums (2015) and The Journey (2013)
Nominated for best Video South African Traditional Music (SATMA) Awards, 2013
Top 18 Idols in South Africa, 2012
Usizi oluswiti (akunye) (Ozimeleyo, 2020)
Eyodidi (Tammy Music, 2015)
Uhambo (uTammy Music, 2013)
UThabisa kunye noMboniso wabahlobo
NgoLwesibini ngentsimbi yeshumi elinanye
Irediyo yoLuntu yeWNHH